Ubunjiniyela - Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
Sizibophezele kakhulu ocwaningweni, entuthukweni nasekuqambeni izinto ezintsha, siyazi ngokuguquguquka kwemboni kanye nesidingo sokwakha imikhiqizo emisha evumelaniswe nezidingo zebhizinisi eziqhubeka zifuneka.
Ubunjiniyela busenhliziyweni yebhizinisi lethu. Singakusiza ukuthi uzuze isisombululo sikazibuthe esenzelwe noma yisiphi isidingo, ngohlelo lokusebenza, ngezindleko, ngesikhathi sokulethwa, ngokuthembeka, noma ngokwakhiwa!
Ubunjiniyela obenzeka ngasikhathi sinye kusukela ekuqaleni kohlelo buhlala buveza imiphumela emihle kakhulu - yokusebenza kahle, ikhwalithi kanye nezindleko. Sisebenza namakhasimende ethu kusukela ekuqaleni kwezinhlelo ezinkulu zokuhamba ngesivinini esikhulu ukuya emakethe.
• Omazibuthe Abangunaphakade - ukukhetha nokucaciswa
• I-Finite Element Analyzes - ukumodela ukusebenza kohlelo lukazibuthe
• Magnetic Assemblies - idizayini yokwenza izinto, ukwakheka kubize, ukuthuthukiswa kokuhlolwa kokwamukela
• Imishini kagesi - ngobuchwepheshe bethu obuhlanganisiwe singakwazi ukuklanywa kokucaciswa okusebenzayo imishini ephelele kagesi
• Idizayini yokukhiqiza
• Idizayini yokubiza
• CNC Machining futhi Ukugaya uHlelo
• Machining tooling futhi lwemidlalo
• Ukuhlanganisa amathuluzi nokulungisa izinto
• Ithuluzi lokuhlola
• Ukulinganisa i-Go / No-Go
• Ukulawulwa kwe-BOM ne-Router
• Ukuhlelwa kwekhwalithi esezingeni eliphakeme
• Ukubalwa kwe-MTBF ne-MTBR
• Ukusungula imikhawulo nezinhlelo zokulawula
• Kopisha izindlela eziqondile zamashidi
• Ama-In-Process Gates ukuqinisekisa ukuthi akukho zinkinga
• Ukuthuthukiswa Kwenqubo Yokuhlolwa Kokwamukelwa
• Ukuhlolwa kukasawoti, ukwethuka, inkungu, umswakama kanye nokudlidliza
• Iphutha, imbangela kanye nokuhlaziywa kwesenzo sokulungisa
• Izinhlelo eziqhubekayo zokwenza ngcono